Terms & conditions | ananda
Below are our terms & conditions of services
Amara Communications Co., Ltd သည် မြန်ဆန်၊ ကောင်းမွန်၍ ပေးရသည့် ငွေကြေးနှင့် ထိုက်တန်ပြီး ယုံကြည်အားထားနိုင်သော 4G ဒေတာ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအား 4G ၊ 4G+ နှင့် 4G LTE ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် ananda ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
ဤသဘောတူညီချက်သည် လူကြီးမင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ (Amara Communications Limited နှင့် ၎င်း၏ Group Companies) အကြားမှ သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ ananda ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို စာရင်းပေးသွင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် လူကြီးမင်းသည် သုံးစွဲသူ Customer တစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့က အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မည့် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေ စည်းကမ်းချက်များ (T&Cs) ကိုလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဤအထွေထွေစည်းကမ်းချက်များ (T&Cs) ပါ စကားလုံးများနှင့် ဖော်ပြချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။
(က) ကျွန်ုပ်တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို စသည့် အသုံးအနှုန်းများသည် Amara Communications Co.Ltd (ACS) နှင့် Group companies တို့ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
(ခ) လူကြီးမင်း သို့မဟုတ် လူကြီးမင်း၏ ဟူသော အသုံးအနှုန်းများသည် Ananda ၏ မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆို [ရယူသုံးစွဲရန်] လျှောက်ထားသူ ၊ လစဉ်ကြေးပေးသွင်း၍ ရယူသုံးစွဲသူကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
(ဂ) MSISDN သည် ACS က သုံးစွဲသူများအား ပေးထားသော MSISDN များ (တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ) ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ MSISDN အားလုံးကို ACS က ပိုင်ဆိုင်ပြီး လူကြီးမင်းထံ အကြောင်းကြား၍ ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ်သိမ်းခြင်းများကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
(ဃ) ဈေးနှုန်းအစီအစဉ်၊ အခြေခံအစီအစဉ် (Price plan/Base plan) သည် လူကြီးမင်း ရွေးချယ်ဝယ်ယူထားသော ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းကို ‘my ananda’ အက်ပလီကေးရှင်းကို သုံး၍လည်းကောင်း၊ www.ananda.com.mm သို့ ဝင်ရောက်ပြီးသော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖုန်းနံပါတ် +959969 787878 ကို ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
(င) ဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ network မှ တစ်ဆင့် ရရှိသော data ၊ content services နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ လုပ်ဆောင်ပေးသော အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဆိုလိုသည်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း
၂.၁။ သုံးစွဲသူအကောင့်နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ရန် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် Ananda အကောင့်ဖွင့်၍ အွန်လိုင်းမှ www.ananda.com.mm တွင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာ service center များတွင်ဖြစ်စေ သွားရောက်၍ မှတ်ပုံတင်ပါ။ မိမိ၏ အကောင့်အား activate ပြုလုပ်နိုင်ရန် အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖြင့် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာမှ တစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူအသုံးပြုနိုင်ရန် MSISDN များပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ MSISDN အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့က ပိုင်ဆိုင်ပြီး စာရင်းသွင်းထားသူ (Registrant) အဖြစ် လူကြီးမင်းထံ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့၍ ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ်သိမ်းခြင်းများကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
မိမိ၏ မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာ သို့မဟုတ် အခြားနေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်ဖြစ်စေ ၊ မိမိကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် မိမိ၏ စောင့်ကြည့်မှုဖြင့် တတိယအုပ်စုအား ပေး၍ အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူရန် လူကြီးမင်းအား ထုတ်ပေးထားသော သုံးစွဲသူအကောင့်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်များ သို့မဟုတ် PIN နံပါတ်ကို လုံခြုံစွာ လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းရန် လူကြီးမင်းတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် မဟုတ်ပဲ သုံးစွဲသူအကောင့်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်များ သို့မဟုတ် PIN နံပါတ် ပေါက်ကြားမှုကြောင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ၊ သွယ်ဝှိုက်၍ဖြစ်စေ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မည်သို့မျှ တာဝန်မရှိပါ။
အထက်တွင် မည်သို့ပင်ဆိုခဲ့စေကာမူ လူကြီးမင်း၏ အကောင့်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် ၊ ချေးငွေစာရင်းစစ်ဆေးရန် ၊ Customer Care Activities များလုပ်ဆောင်ရန်အပြင် ဥပဒေအရ လိုအပ်သည့် အခြားသောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုများနှင့် အစီရင်ခံခြင်း ၊ ဝန်ထမ်းများအား Customer ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရာတွင် လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းကို လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကြိုတင်သဘောတူခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များတွင် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ၊ အီးမေးလ်များ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်သည့် စာတိုများ ပါဝင်သည်။
၂.၂။ Privacy နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလုံခြုံမှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် (Privacy) နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို သင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းများ အသုံးပြု၍ ကာကွယ်ပေးသောကြောင့် လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ကောက်ယူအသုံးပြုသည်ကို နားလည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးပါပါသည်။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်လိုပါက [ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုပါက] (ဥပမာအားဖြင့် Ananda ၏ မည်သည့်ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မဆို လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် Portal ကိရိယာများ သုံးစွဲခြင်းတို့အတွက်) အမည် ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၊ ဓာတ်ပုံ ၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာတို့ အပါအဝင် လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုပါဝင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြုလုပ်ရန် Ananda ၏ ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ဆောင်မှု နှင့် Portal များကို အသုံးပြုလိုပါက လူကြီးမင်း၏ ငွေပေးချေမှုကို ဆောင်ရွက်ရန် ခရက်ဒစ်ကတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကိုလည်း ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
အချို့သော အခြေအနေများတွင် ဥပဒေအရ သို့မဟုတ် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဤသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်သာ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါမည်။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား (၁) လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စား တတိယအုပ်စုက ကောက်ခံရန် ၊ အသုံးပြုရန် ၊ သိမ်းဆည်းရန် နှင့် (၂) အပိုဒ် ၂.၂. အရ လူကြီးမင်း၏ သဘောတူညီချက် ၊ ခွင့်ပြုချက်သည် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန် ၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် portal ကိရိယာများကို အသုံးပြုနေသရွေ့ အကျိုးသက်ရောက်စေမည် ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူလက်ခံ၍ ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အပိုဒ် ၂.၂. အရ ပေးအပ်ထားသည့် သဘောတူညီချက် ၊ ခွင့်ပြုချက်ကို ပြင်ဆင်လိုပါက အခါအားလျော်စွာ ကျွန်ုပ်တို့က ချမှတ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အကြောင်းကြားနိုင်သည်။
၂.၃။ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန်အတွက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာကို လူကြီးမင်းအား ပေးအပ်ထားပါမည်။ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ထိန်းသိမ်းရန်မှာ လူကြီးမင်း၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ ပျက်စီးခြင်း ၊ ခိုးယူခံရခြင်း ၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ အဆိုပါ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ပြန်အမ်းရန်နှင့် အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ၊ အသုံးမပြုသည်ဖြစ်စေ လူကြီးမင်း ကြိုတင်ငွေပေးသွင်း၍ ရယူထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ငွေပြန်အမ်းရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မည်သို့မျှ တာဝန်မရှိပါ။ အကယ်၍ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ ပျက်စီးခြင်း ၊ ခိုးယူခံရခြင်း ၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့အား ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါတို့နှင့် အညီ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးပါသည်။
(က) လူကြီးမင်းရွေးချယ်သည့် Price Plan နှင့် Base Plan
(ခ) လူကြီးမင်းရွေးချယ်သည့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ
(ဂ) လူကြီးမင်း၏ နေရာဒေသတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ network ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ
မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူလိုသည့် Customers များအား ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားသွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့က ခွင့်မပြုသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Network ဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့် Network မရရှိခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ မည်သို့မျှအာမခံချက်မပေးပါ။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအမြန်နှုန်း နှင့် network သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပမှ ဖြစ်သော) အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးကြောင့် Network မရနိုင်ခြင်း ၊ တည်ငြိမ်းမှုမရှိခြင်းနှင့် ချို့ယွင်းခြင်းတို့အတွက် ပေးလျော်ရန် သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းပေးသွင်းခဲ့သည့် ငွေအား ပြန်အမ်းရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်းရယူထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုဖြစ်စေ ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၂.၅။ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဈေးနှုန်းများ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် အထွေထွေ စည်းကမ်းချက်များ (T&C) အရ မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမဆို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း နှင့်ရပ်စဲခြင်းတို့ကို အချိန်မရွေး လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အဆိုပါပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အထွေထွေ စည်းကမ်းချက်များ (T&C) သည် လူကြီးမင်းထံ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့သည့် အချိန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Website တွင် ကြေညာသည့် အချိန်မှ စ၍ အကျိုးသက်ရောက်ပါမည်။ ထိုသို့ အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိပြီး သို့မဟုတ် ကြေညာပြီးနောက် လူကြီးမင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်အသုံးပြုဆဲဖြစ်ပါက အဆိုပါပြောင်းလဲသတ်မှတ်မှုကို လက်ခံသဘောတူသည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများနှင့် ဈေးနှုန်းများကို တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ Website www.ananda.com.mm တွင် update ပြုလုပ်ပေးသွားပါမည်။
၂.၆။ ဝန်ဆောင်မှုဌာန (Service Center)
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုဌာန (Service Center) သည် ဆက်သွယ်ရေးဌာနဖြစ်ပြီး ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ ၊ Price-Plan/Base-Plan ထုတ်ပေးခြင်း ၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်း၏ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားခြင်းတို့အပါအဝင် လူကြီးမင်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုဌာနဖြစ်ပါသည်။
အခြားနည်းဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါက (လူကြီးမင်းဝယ်ယူထားသည့် ဒေတာအစီအစဉ်များ အပါအဝင်) ကျွန်ုပ်တို့က ပံ့ပိုးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် နှုန်းထားများသည် ကုန်သွယ်ခွန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရသို့ ပေးဆောင်ရသည့် အခွန်များ အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
၃။ သုံးစွဲသူ၏ ဝတ္တရားများ
၃.၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကန့်သတ်ချက်များ
ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ (သို့) Customer တယောက်အနေဖြင့် လူကြီးမင်းသည် –
(က) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူအသုံးပြုရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ရယူအသုံးပြုခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်။
(ခ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများကို ချိုးဖောက်၍ စီးပွားဖြစ် ထပ်ဆင့်ရောင်းချခြင်း ၊ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ထပ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရ။
(ဂ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြု၍ ပေးပို့သော (သို့) လက်ခံရရှိသော အချက်အလက် data များ လုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူကြီးမင်းတွင်သာ တာဝန်ရှိသည်။
(ဃ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူအသုံးပြုခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ချိတ်ဆက်သည့် ကိရိယာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်း၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
(င) ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ ပျက်စီးခြင်း ၊ ခိုးယူခံရခြင်း ၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့အား ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရန်မှာ လူကြီးမင်း၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
(စ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် အသုံးမပြုပါနှင့် သို့မဟုတ် အသုံးမပြုမိစေရန် သတိပြုပါ။
(၁) ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်း
(၂) အသိဉာဏ်ပစ္စည်းအပါအဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ မည်သည့်တရားဝင်အခွင့်အရေးများကိုမဆို ချိုးဖောက်ခြင်း
(၃)တရားမဝင်သော ၊ ဂုဏ်သရေပျက်ပြားစေသော ၊ ထိခိုက်စေနိုင်သော ၊ စော်ကားသော ၊ ခြိမ်းခြောက် သော စာတမ်းများ (သို့) အကြောင်းအရာများ ထုတ်လွှင့်ခြင်း ၊ ဖြန့်ဝေခြင်း နှင့် အဆက်အသွယ်လုပ်ခြင်းတို့ အတွက် အသုံးချခြင်း
(၄) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု ၊ network သို့မဟုတ် မည်သည့်တတိယအုပ်စု၏ network ကိုမဆို ဖျက်ဆီးခြင်း ၊ နှောက်ယှက်ခြင်း
(၅) ငွေကြေးကုန်ကျမှု မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း
၄။ ဆိုင်းငံ့ခြင်းနှင့် ရပ်စဲခြင်း
၄.၁။ ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း ၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုရာတွင် အောက်ပါအခြေအနေများကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
အထွေထွေ စည်းကမ်းချက်များ (T&C) နှင့် ဆန့်ကျင်၍ အခြားချိတ်ဆက်သည့် ကိရိယာ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုလျှင် သို့မဟုတ် LTE TDD 2,600 MHz နည်းပညာဖြင့် အသုံးမပြုနိုင်သည့် ကိရိယာကို အသုံးပြုလျှင်
ကွန်ရက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုံခြုံမှု သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု ယူဆရသော လုပ်ရပ်များကို ပြုလုပ်လျှင် သို့မဟုတ် ပြုလုပ်စေလျှင်
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ၊ တရားမဝင်၊ မလျော်ကန်သော နည်းလမ်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူထားသည်ကြောင်း သံသယရှိလျှင်
ချိတ်ဆက်သည့် ကိရိယာ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးကြောင်း အကြောင်းကြားလာလျှင်
လူကြီးမင်း၏ price plan/base plan သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၁၅၀ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့က အခါအားလျော်စွာပြောင်းလဲသည့်ကာလအထိတိုင်အောင် လူကြီးမင်း၏ Ananda အကောင့်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများမရှိတော့လျှင် (ဥပမာ- ငွေထပ်မံမဖြည့်ခြင်း ၊ price plan/base plan ထပ်မံဝယ်ယူမှုမရှိခြင်း)
လူကြီးမင်း၏ Ananda အကောင့်တွင် လက်ကျန်ငွေ နည်းသည့်အခါ သို့မဟုတ် မရှိတော့သည့်အခါ
လူမွဲစာရင်းခံယူလျှင် သို့မဟုတ် မြီရှင်နှင့် သဘောတူညီချက် ရယူလျှင် သို့မဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းလျှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အပြစ်ဒဏ်ပေးခံရလျှင် သို့မဟုတ် လူကြီးမင်း၏ အခြေပစ္စည်းကို လွှဲပြောင်းရယူမည့်သူ ပေါ်ပေါက်လျှင်
လူကြီးမင်း၏ base plan ကုန်ဆုံးသည့်အခါ သို့မဟုတ် လူကြီးမင်း၏ အကောင့်တွင် ငွေနည်းသည့်အခါ သို့မဟုတ် ငွေမရှိသည့်အခါ မြန်နှုန်းနှင့် ဒေတာပမာဏများကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ တစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကန့်သတ်နိုင်သည်။
အစိုးရက တားမြစ်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ဝင်ရောက်လျှင်
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ သို့မဟုတ် တရားရေးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၏ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်အရ သို့မဟုတ် အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ မထိန်းချုပ်နိုင်သည့် မလွန်ဆန်နိုင်သည့် ဖြစ်ရပ်များအရ လူကြီးမင်းအား ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။
လူကြီးမင်းအား အမြဲတစေဝန်ဆောင်မှုပေးရန် မဖြစ်နိုင်တော့လျှင်
သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆရသည့် အကြောင်းရင်းရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်းထံ အကြောင်းကြားစာပေးပို့၍ မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆို အချိန်မရွေး (သင့်လျော်သည့် ကာလအထိ) ဆိုင်ငံ့ထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ရပ်စဲနိုင်သည်။ အပိုဒ် (၃) ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာမှုမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြုခွင့်ကို ရပ်စဲဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ လူကြီးမင်း၏ အကောင့်တွင် လက်ကျန်ငွေရှိပါက ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်သည်။
၅။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ကန့်သတ်ချက်
အောက်ပါတို့အပါအဝင် ပေါ့ဆမှု (သို့) လွဲမှားစွာ စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်မဟုတ်သည့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မည်သို့မျှ တာဝန်မရှိပါ။
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ သို့မဟုတ် တရားရေးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၏ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်အရ လိုက်နာမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု
ကြိုတင်မသိမြင်နိုင်သော (သို့) မထိန်းချုပ်နိုင်သော အရေးပေါ်အခြေအနေ (သို့) မလွန်ဆန်နိုင်သည့် ဖြစ်ရပ်များကြောင့် ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု
ဝင်ငွေ (သို့) အမြတ်အစွန်း ဆုံးရှုံးမှု ၊ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးမပြုနိုင်ခြင်း ၊ အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးခြင်း ၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးခြင်း ၊ ရနိုင်မည့်အလားအလာရှိသော ဝင်ငွေဆုံးရှုံးခြင်းစသည့်တို့ အပါဝင် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု
တတိယအုပ်စုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု
အထက်ပါအပိုဒ်တွင် မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုရယူရာမှ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဆိုပါက အဆိုပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ပေါ်ပေါက်စေသည့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် သီးသန့်ရယူထားသည့် ဝန်ဆောင်ခထက် မပိုစေရ။
၆.၁။ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နှင့် အခြားအခွင့်အရေးများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ www.ananda.com.mm website တွင် ananda အမည်အပါအဝင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်သော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ ၊ မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားဆဲ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ ၊ ဒီဇိုင်း နှင့် ကုန်ပစ္စည်းအမည်များ ပါဝင်သည်။ ဤအသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နှင့် အခြားအခွင့်အရေးများကို ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်မှုသည်။
၆.၂။ ကွဲပြားခြားနား၍ အကျိုးသက်ရောက်မှု
အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် မည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုမဆို တရားမဝင်ဟု မှတ်ယူပါက ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုသာ တရားမဝင်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ဤသဘောတူစာချုပ်၏ အခြားပြဋ္ဌာန်းချက်များအပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိစေရပါ။
၆.၃။ အခွင့်အရေးကို စွန့်လွှတ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကို သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ မကျင့်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် အတည်ပြုမဆောင်ရွက် ခြင်း နှင့် အဆိုပါအခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးရန် သို့မဟုတ် အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် နှောင့်နှေးခြင်းသည် အဆိုပါအခွင့်အရေးများကို စွန့်လွှတ်သည့်သဘော မသက်ရောက်စေရ၊ သို့မဟုတ် အဆိုပါမကျင့်သုံးမှု သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးမှုတစ်စုံတစ်ရာသည် သတ်မှတ်ထား သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရဖြစ်စေ၊ လူကြီးမင်းနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အခြားသဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခွင့်အရေးများ နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးအပေါ် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိစေရ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုများ ၊ အစီအစဉ်များ ၊ နှုန်းထားနှင့် ဈေးနှုန်းများ ၊ ဒေတာကာကွယ်မှုမူဝါဒနှင့် အကောင့်အသုံးပြုပုံမူဝါဒများကို တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင် ၊ ပြောင်းလဲ ၊ ထပ်လောင်းတိုးချဲ့ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ၎င်းပြင်ဆင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Website တွင် ကြေညာ၍ဖြစ်စေ ၊ လူကြီးမင်းအား အကြောင်းကြား၍ဖြစ်စေ Update ပြုလုပ်သွားပါမည်။ ထိုသို့ ပြင်ဆင်မှုကို ကြေညာပြီးနောက် လူကြီးမင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်အသုံးပြုဆဲဖြစ်ပါက အဆိုပါပြင်ဆင်မှုကို လက်ခံသဘောတူသည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။
ထိုကဲ့သို့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများကို စာတိုများ ၊ အီးမေးလ်များ ၊ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဖြန့်ဝေသော သတင်းစာများ မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ Website မှဖြစ်စေ ၊ သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆသည့် အခြားကိစ္စရပ်များအား အများပြည်သူသို့ အသိပေးကြေညာ၍ ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားသွားပါမည်။ ဤနည်းအားဖြင့် အကြောင်းကြားခြင်းကို လုံလောက်သည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအား ထုတ်ပြန်သည့် နေ့မှာပင် လူကြီးမင်း ရရှိသည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။
၇။ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ
ကျွန်ုပ်တို့အား ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ဖြစ်စေ ၊ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် အသုံးများသော ဆိုရှယ်မီဒီယာများမှ မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်းတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အီးမေးလ် [email protected]
+၉ ၅၉ ၉ ၆၉ ၇၈၇၈၇၈
အမှတ် (၁၁၄/အေ)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ဆရာစံရပ်ကွက် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
Copyright © 2021 All rights reserved by ananda
Copyright © 2021 · Ananda Genesis Child Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in